Friday, 02.28.2020, 01:36am (GMT+5.5) Home Contact
अब घोषित रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण
Tuesday, 11.10.2015, 11:24am
नेपालमा संविधान जारी भो । भारतलाई लाग्यो यो संविधान एटम बम हो– जसले भारतको स्वार्थ पूरा गर्दैन । हुन पनि हो, संविधामा मधेश प्रदेश, नागरिकता जस्ता विषयले भारतीय स्वार्थमा बम प्रहार गर्याे । त्यसैले भारतले एकथरिको असन्तुष्टिलाई बहाना गरेर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । उसले अहिले पनि नाकाबन्दी लगाएको भनेको छैन । उल्टै नेपालमा मधेशवादीको आन्दोलनले अबरोध सिर्जना भएको दावी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरिरहेको छ ।
काम नगरेका कि गर्न नदिएको ?
काठमाडौं । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने पञ्चायतकालीन अभियानका सन्दर्भहरू उठ्न थालेका छन् । तत्कालीन सरकारले २०४८ सालसम्म नेपालभित्रै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्न लक्ष्यसहित काम थालेको भए पनि काम पाएका विदेशी कम्पनीहरूले द्रुतगतिमा काम गरेनन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि ती योजनाहरू त्यसै तुहिए ।
चीनसंग थप नाका खोल्ने सहमति
Tuesday, 11.10.2015, 11:23am
काठमाडौं । नेपाललाई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसंगको व्यापार बढाउने र भारत निर्भरता घटाउने एउटा अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । भारतको नाकाबन्दीपछि उत्तरी छिमेकी चीनको केरुङ नाकाबाट इन्धन लगायत अत्यावश्यक बस्तु आयात गर्ने सहमतिसंगै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा हाल प्रचलनमा रहेका भन्सार कार्यालयलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमति भएको छ ।
उत्तरतिरका सबै नाका खुलाउँछौं
Tuesday, 11.10.2015, 11:15am
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल फेर्ने बाटो बनाएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । भारतको नाकाबन्दीलाई युद्धकालमा भन्दा पनि अमानवीय व्यवहार भन्दै कडा टिप्पणी गर्दै आउनुभएका ओलीले उत्तरतिरका सबै नाका खुलाउने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भारतको नियत अरु उदांगिदै
Tuesday, 11.03.2015, 01:56pm
काठमाडौं । डेढ महिनादेखि वीरगञ्ज नाकाको दशगजामा पाल टाँगेर धर्ना दिँदै भारतको ‘अघोषित नाकाबन्दी’लाई सघाउँदैआएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्तालाई हिजो बिहान नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गरी हटाए पनि केही समयपछि पुनः अबरोध उत्पन्न भयो । त्यहाँको स्थिति तनापूर्ण भएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा भारतीय नागरिक आशिमकुमार राम रहेका छन् । प्रहरीसंगको झडपमा दर्जन बढी घाइते भए । त्यसमा ८ जना प्रहरी रहेका छन् । त्यसै गरी प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये आधाभन्दा बढी भारतीय नै रहेका छन् । यसबाट मधेश आन्दोलनमा भारतीयहरुको संलग्नता प्रष्ट भएको छ ।
डा. यादवको कार्यकाल स्मरणीय
Tuesday, 11.03.2015, 01:55pm
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति पनि ऐतिहासिक नै मानिन्छ । शासन सत्ताका उच्च तहमा पुग्न नसकेको मधेशी समुदाबाट राष्ट्रपति बन्नुभएका डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झाको चयनले नेपालको राजनीतिक अभ्यास अचम्मकै मानिन्छ । उपराष्ट्रपति झाको शपथग्रहण प्रकरण र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदाका केही फैसलाले ठूलो विवाद खडा गरे पनि पछिल्ला समयमा उहाँले राष्ट्रको अविभावकीय भूमिका इमान्दारीपूर्वक नै निर्वाह गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।
यस्तो अभ्यास अन्त कमै हुन्छ
काठमाडौं । बुधबार मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक महिला राष्ट्रप्रमुख पाएपछि यसलाई समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको उच्चतम अभ्यासको रुपमा हेरिएको छ ।
मुलुकले पायो महिला राष्ट्रप्रमुख, उपराष्ट्रपति जनजाति
Tuesday, 11.03.2015, 01:54pm
काठमाडौं । गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा मुलुकले एकजना महिलालाई पाएको छ भने समावेशी सिद्धान्तको अभ्यास गर्ने क्रममा जनजाति प्रतिनिधित्व गर्दै एमाओवादी नेता नन्दबहादुर पुनलाई उपराष्ट्रपति पाएको छ ।
भारतीय एकाधिकार तोडियो
Tuesday, 11.03.2015, 01:52pm
काठमाडौं । भारतको नाकाबन्दीकाबीच ४० वर्षदेखि कायम रहेको इन्धन आपूर्तिको एकाधिकार तोड्दै चीनसँग दीर्घकालीनरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगम र चीनको सरकारी स्वामित्वको पेट्रो चाइनाबीच बुधबार बेइजिङमा सम्झौता भयो । यो सम्झौतासँगै नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बीचको पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार व्यापार तोडिएको छ भने चीनबाट इन्धन आयातको बाटो खुलेको छ ।
हिमाल, पहाड तराईको एकता टुट्नु हुँदैन
Tuesday, 11.03.2015, 01:41pm
काठमाडौं । निवर्तमान राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले हिमाल, पहाड, तराई जहाँ बसे पनि एकताबद्ध भएर बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आफूले दौरा, सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर तराई, पहाड र हिमाललाई जोड्ने काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नाकाबन्दीबिरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको नयाँ लहर
Tuesday, 10.27.2015, 02:54pm
काठमाडौं । भोलि नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ संविधान बनेपछि पहिलोपटक हुनलागेको यो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनेभएको छ । उता भारतले महिना दिन अगाडि सुरू गरेको अघोषित नाकाबन्दी अझै जारी छ । प्रतिस्पर्धा देखिए पनि यथास्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन भने एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपति र माओवादी पूर्व लडाकु उपकमाण्डर नन्दकिशोर पुन उपराष्ट्रपति हुने पक्कापक्की छ ।
भोलि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन
Tuesday, 10.27.2015, 02:52pm
काठमाडौं । संविधान अनुसार सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन नभएपछि व्यवस्थापिका– संसद्मा भोली (कात्तिक ११) गते निर्वाचन हुने भएको छ । राष्ट्रपतिमा सत्तापक्षबाट एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपतिमा माओवादीका पूर्व लडाकु उपकमाण्डर नन्दकिशोर पुनको विजय लगभग निश्चित छ । विपक्षीका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले कुलबहादुर गुरुङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ ।
मुलुकको अवस्था भयावह : भारतको तीब्रतम् चलखेल
Tuesday, 10.06.2015, 11:24am
नेपाली जनएकता खण्डित गर्ने षड्यन्त्र
काठमाडौं । मुलुक महासंकटको भुमरीमा फँसिरहेको छ । भारतले दुई हप्तादेखि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हटाएको जनाउ दिए पनि तेलको आपूर्तिमा नियन्त्रण जारी रहेको छ । भारतीय अधिकारीहरूले क्षण क्षणमा झूट बोलिरहेका छन् । भारत सरकारले नेपालमा हैकम जमाउन चालेको कदमको भारतकै राजनीतिक नेताहरू र बुद्धिजीविहरूले समेत विरोध गरिरहेका छन् । भारतमै गासवासको प्रवन्ध गरी सीमा नाकामा ‘मधेशी मोर्चा’ले जारी राखेको घर्नाले पनि आपूर्ति प्रणालीमा उत्तिकै अवरोध खडा गरेको छ । सरकारले संविधान जारी गर्नासाथ ‘मधेश आन्दोलन’लाई सम्बोधन गर्न भनी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेको भएपनि त्यसको कुनै असर छैन । मधेशी मोर्चाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर वार्तामा बसे पनि उपेन्द्र यादवले ‘वार्ता निरर्थक’ भन्न छोडेका छैनन् ।
ठूलो मौका गुमायो नेपालले
Tuesday, 10.06.2015, 11:23am
नेपालमाथि भारतको ज्यादतीका बिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुरा उठाउनुपर्ने आवाज आम नेपालीको छ । सीमा अतिक्रमण, भारतले अबैध किसिमले बनाएका बाँधका कारण उत्पन्न डुबान समस्या नेपालको स्थायी समस्या हो । यी विषयहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समाधान गर्नुपर्ने भए पनि नेपालका नेताहरूले वेवास्ता गर्दैआएका छन् । पछिल्लो समय भारतको ज्यादतीबिरुद्ध आवाज उठाउने एउटा स्वर्णिमा मौका थियो, त्यो पनि गुमायो । नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसकै बीचमा सुरु भएको राष्ट्रसंघको ७० औं महासभामा नेपालले यो कुरा उठाउने विश्वास गरिएको थियो तर, उठेन ।
राष्ट्रिय सरकार नबने के हुन्छ ?
Tuesday, 10.06.2015, 11:22am
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघिसार्ने निर्णय गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसै सताभित्र सहमतीय सरकार गठन गरिसक्न राष्ट्रपतिले आव्हान गरिसकेपछि मुलुकको राजनीति नयाँ सरकारतिर सोझिएको छ । तर नेताहरू कोही सहमतीय सरकार नै बन्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने कोही सहमतीय सरकारको सम्भावना कम रहेकाले बहुमतीय सरकार बन्ने बताइरहेका छन् । यदि मुलुकले सहमतीय सरकार पाएन भने मुलुकले कस्तो गति लेला भन्ने प्रश्न उठेको छ । कांग्रेस सहमतीय सरकारको विपक्षमा उभिने संकेत दिइसकेको छ ।
सुन, पेट्रोल, फलाम सबै छ नेपालमा, तर अबरोध भारतकै
Tuesday, 10.06.2015, 11:21am
नेपालमा पेट्रोलियमसंगै सुन, फलाम, तामाको खानी पनि प्रशस्त रहेको छ । तर, उत्खनन् हुन सकेको छैन । बहुमूल्य पत्थरहरूको भण्डार छ । नेपाललाई समृद्धशाली बनाउने सबै महत्वपूर्ण वस्तु प्रकृतिको गर्भमा छ, तर त्यसको उत्खन नै हुने गरेको छैन । नेपाली युवाहरूले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रकमले भारतबाट वस्तु किनेर खाने अनि मेहेनती बन्न छाडेर अल्छी बनेर भारतीय सिरियल हेर्दै दिन बिताउने कामलाई जीवनस्तर उकासिएको मान्ने गरिएको छ ।
भारतको नांगो खेलविरुद्ध नेपाली एकजूट
Tuesday, 09.29.2015, 12:10pm
काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक आइपरेको संकटको समाधान कसरी भन्ने अहं सवाल उत्पन्न भएको छ । ६ हप्तादेखि जारी रहेको मधेश आन्दोलनले खडा गरेको समस्या र संविधान निर्माणमा आफ्नो स्वामित्व नरहेको आक्रोश पोख्दै भारतले गैरकुटनीतिक र अमर्यादित रुपमा चालेको कदमले उत्पन्न गरेको जटिलतालाई राजनीतिक कुटनीतिक ढंगले समाधान गर्ने क्षमता सरकार र प्रमुख तीन दलका नेताहरूले देखाउन सकेका छैनन् । भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा नांगो हस्तक्षेप गरेर नेपालको संविधान निर्माणमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न गरेको अन्तिम प्रयास विफल भएपछि मधेशी आन्दोलनको अभिन्न अंग बनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्याे ।
ठ्याक्कै २०४५ सालमा जस्तै
Tuesday, 09.29.2015, 12:08pm
नेपालमा भएका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको जस भारतले नै लिने गरेको छ । उसले जस मात्र हैन ब्याज समेत असुल्दै आएको छ । २०६२।०६३ को आन्दोलनको सावाँ र ब्याज खाइसकेको भारतले मधेश आन्दोलनको ब्याज खान नपाएपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउन पुगेको छ । २०४५ सालको नाकाबन्दीले पछिनहटेको नेपाललाई घुँडा टेकाउन २०४६ को आन्दोलनलाई बल दिएको र त्यो आन्दोलन साम्य पार्न भारतको स्वार्थ अनुसारको सम्झौताको प्रति पठाएको विषय अहिले पनि चर्चामा छ । (पृष्ठ तीन पनि हेर्नुहोस्) संविधान बनेपछि यस्तै बुँदा भारतले सार्वजनिक गरेर आफ्नो चरित्र उदांग बनाएको छ ।
मधेशी नेताको हातमा छैन आन्दोलनको लगाम
Tuesday, 09.29.2015, 12:05pm
अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै भएको आन्दोलन मुलुकमा हिंसा मच्चाउने उद्यममा परिणत भैरहेको छ । कैलालीमा भदौ ७ गते भएको नरसंहारदेखि आजका मितिसम्म मधेशमा हिंसा मच्चिइरहेको छ । कैलालीको घटनापछि नै आन्दोलनमा घुसपैठ भएको बयानबाजी गरिरहेका मधेशवादी दलका नेताहरू अहिले आन्दोलन हाँक्नसक्ने हैसियतमा नरहेको र आन्दोलन उनीहरूको हातबाट फुत्किसकेको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रसंघ पनि भारतकै बाटोमा ?
Tuesday, 09.29.2015, 12:04pm
नेपालमा संविधान जारी भएपछि राष्ट्रसंघले जस्तो भूमिका खेल्यो त्यो भने आश्चर्यलाग्दो छ । नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले ‘नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव’ अस्वीकार गरेजस्तै नयाँ संविधान पनि अस्वीकार गरी नाकाबन्दी नै लगाएको अवस्थामा राष्ट्रसंघले समेत लामो समयसम्म “नेपालमा संविधान जारी भएको कुरा सुन्नमा आएको” भन्ने विज्ञप्ति जारी गरेर टार्याे ।
» भट्टराई बहिर्गमनको निहितार्थ
» धनी नभए पनि नेपालको मान–सम्मान उच्च छ
» माओवादीले भारतीय गाडी तथा चलचित्र बन्द
» “नेपालको संविधान २०७२”को ऐतिहासिक घोषणा
» संविधान बन्यो कार्यान्वयन कसरी ?
» संविधान शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव जस्तै नहोस्
» प्रधानमन्त्रीले आँसु झार्दा पनि मन पग्लिएन
» देशको अस्तित्व संकटमा परेको प्र.म.को स्वीकारोक्ति
» भारतीय रणनीतिको भार कहिलेसम्म !
» यो आन्दोलन हैन
» चार दलका नेतालाई निल्नु न ओकल्नु
» के दोष थियो यिनको ?
» अब आयोग बनाएर आगो निभ्दैन
» कैलालीमा सुरक्षाकर्मीहरुकै विभत्स हत्या : देशको परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर
» सात प्रदेश : थोरै मात्र खुसी भए
» राजनीतिमा अपराध घुसेपछि
» चौतर्फी विरोधको सामना गर्न कठीन : दुई हप्ताभित्रै संविधान आउने पक्कापक्की
» धर्ममा नेताहरूको रहस्यमय मौनता
» चार दलका कुरा मिल्यो, अरु आक्रोशित
» वरिष्ठ राजनीतिज्ञ देवकोटाको निधन
Page 11/33: « :: ... 8910 11 12 13 14 ... :: »